नेपालमा थप १२२१ जनामा कोरोना संक्रमण, ३८ हजार ५ सय ६१ पुगे संक्रमित ! – Sulsule
नेपालमा थप १२२१ जनामा कोरोना संक्रमण, ३८ हजार ५ सय ६१ पुगे संक्रमित !
सुलसुले २०७७ भदौ १४ गते १६:४६ मा प्रकाशित
देशका विभिन्न प्रयोगशालाहरुमा गरिएको परीक्षणमा आइतबार थप १२२१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं जिल्लामा ३७२ जना, ललितपुरमा १२ जना र भक्तपुरमा ४५ जना गरी काठमाडौं उपत्यकामा थप ४२९ जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताएका छन् ।
योसँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको सङख्या ३८ हजार ५ सय ६१ पुगेको छ । उनका अनुसार अहिले देशभरि १७,५१८ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार संक्रमित मध्ये १०,६१२ जना संस्थागत आइसोलेशनमा र बाँकी ६,९०० जना घरमै छन्।
विगत २४ घण्टामा २ सय ६७ जना कोरोनाबाट निको भई घर फर्किएको गौतमले बताए। २० हजार ८ सय २२ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। हालसम्म ६ लाख ८२ हजार ३ सय ४३ जनाको पिसिआर भएको छ। विगत २४ घण्टामा नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट थप १४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ।
जसमा ४ महिला र १० पुरुषसहित १४ जना रहेका छन् । मृतक महिलामा सुनसरी, बारा, महोत्तरी र काठमाडौंका १–१ जना रहेका छन् । यस्तै मृतक पुरुषमा महोत्तरी र रुपन्देहीका २–२ तथा सुनसरी, मोरङ, रौतहटका, ललितपुर, भक्तपुर र नवलपरासीका १–१ जना गरी १० जना रहेका छन् । यो वृद्धिसँगै कोभिड १९ बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २२१ पुगेको छ ।